Milina fanontam-pirinty Screen miasa - China Changzhou Plet Pirinty natao
Milina fanontam-pirinty Screen asa
Screen mpanonta miasa fitsipika fampidirana -
1. Fiaramanidina milina fanontam-pirinty efijery fisaka asa.
1 Fiaramanidina lamba milina fanontam-pirinty miasa tsingerin'ny fandaharana. Kanefa kosa raha ny iray fisaka halftone lamba karazana monochromatic semi-mandeha ho azy efijery fanontam-pirinty milina, iray amin'ireo ny asany tsingerina dia: sakafo → toerany → lavo eny → nidina ho any amin'ny ranomainty lovia, niverina tany amin'ny ranomainty takela → fikikisana ny ranomainty tapaka lalan-dra → miakatra ny ranomainty Plate → mitete indray ranomainty takela → → hanandratra dikan ranomainty tapaka lalan-dra miverina famoahana toerany → → mandray.
Ao amin'ny mitohy tsingerina fandidiana, raha mbola ny asa mety ho tanteraka, ny fotoana nipetrahan'ny tsirairay dia tokony ho toy ny zavatra fohy araka izay azo atao, mba hanafohezany ilay bisikileta miasa tsirairay ary hampitombo fahombiazan'ny asa.
3 imprinting tsipika. Nandritra ny dingana fanontam-pirinty, ny ranomainty, ary ny lamba fanakonana takela takela Voageja mba hanangana ny fifandraisana eo amin'ny lamba fanakonana tsipika lovia sy ny substrate, izay atao hoe ny fisian'ny tsipika. Io andalana dia teo an-tsisin'ny ny squeegee sy ny maro mamorona ny tsipika ambonin'ny pirinty. Sarotra ny hahazoana ny tsara nip, satria tapaka lalan-dra ny holatry dia dingana mavitrika.
3 efijery milina fanontam-pirinty miasa. Dia nandray ny fampiasa matetika tanana miendrika efijery fiaramanidina lamba fanontam-pirinty milina ho ohatra, ny miasa fitsipiky ny ny efijery fanaovana pirinty milina azo lazaina toy izao manaraka izao: ny fahefana Mifindra ny fampitana rafitra, ka ny ranomainty squeegee mamotsitra ny ranomainty, ary ny lamba fanakonana takela fanontam-pirinty nandritra ny hetsika mba hahatonga ny lamba fanakonana ny lovia sy ny substrate ny endrika imprinting tsipika. Koa satria ny varavarana lamba dia manana N1 fihenjanana sy N2, ny hery G2 no niteraka ny squeegee, sy ny mahatonga ny lamba fanakonana ny niatrika an'izany lovia raha tsy mikasi ny substrate imprinting afa-tsy ny tsipika. Ny ranomainty dia eo ambany ny vokatry ny hery voafehy squeegee ny F1, ny squeegee dia tafaporitsaka avy ao amin'ny mampihetsi-po nip ny substrate ny alalan 'ny harato.
Nandritra ny dingana fanontam-pirinty, ny fanontana lamba lovia sy ny squeegee dia nifindra mikasika samy izy, ary ny hery voafehy F1 sy ny niatrika an'izany koa G2 Nifindra synchronously. Eo ambany ny asa ny ny niatrika an'izany, ny varavarana lamba dia niverina ho any hifandray amin'ny substrate ara-potoana mba tsy fifandraisana. Soritra maloto. Izany hoe, mandritra ny fanontam-pirinty tapaka lalan-dra, ny varavarana lamba dia hatrany sembana sy rebounded.
Taorian'ny squeegee unidirectional no mamarana ny fanontam-pirinty, ny squeegee dia tafasaraka tanteraka amin'ny ny substrate miaraka amin'ny efijery lovia. Mandritra izany fotoana izany, ny squeegee dia niverina tany amin'ny ranomainty mba hamita ny tsingerin'ny fanontam-pirinty. Ny elanelana misy eo amin'ny ambony ambonin'ny ny substrate sy ny indray ambonin'ny lovia ny efijery rehefa hiverina ranomainty no antsoina hoe mitovy lovia elanelana lavitra na ny harato, ary amin'ny ankapobeny dia tokony ho 2-5 mm. Rehefa tanana-pirinty, ny mpandraharaha ny teknika sy ny fahaizana hisy fiantraikany ny fananganana ny nip mivantana. Amin'ny fomba fanao, lamba efa voangony pirinty be dia be ny traikefa sarobidy, izay azo fintinina amin'ny teboka enina, izany hoe, mba hiantohana ny linearity, fanamiana hafainganam-pandeha, mitovy zoro, ny tsindry equalization, tsy nety nanao miaramila, ary verticality ny squeegee. Amin'ny teny hafa, ny squeegee nizotra tamin'izay hitsiny dia tokony ho mandritra ny fanontam-pirinty, ka tsy azo hozongozonina ny tsara sy ny ankavia; dia tsy afaka ny ho mafy aloha sy aorian'ny izany fifadian-kanina, ary mety ho mora na mafy aloha sy aorian'ny dia mafy; ny fiolahana ny fironana ho any amin'ny ranomainty takela dia tokony hotehirizina tsy tapaka, sy manokana vola tokony ho fandresena ny Jery mitongilana fiolahana. Mampitombo tsikelikely ny olana iombonana, fanontam-pirinty tsindry dia tokony hotehirizina fanamiana; foana ny elanelana misy eo amin'ny squeegee sy ny lafiny anatiny ny harato filanjana mety, ka tandremo ny ranomainty sy ny lovia mamorona mijidina.
2. Flat milina fanontam-pirinty efijery surface asa. Surface efijery fisaka lamba pirinty midika hoe fanaovana pirinty ahantòny amin'ny fisaka lamba amin'ny cylindrical na bongo ambonin'ny. Teo ambanin'ny fepetra sasany, dia azo atao ihany koa ny manao efijery fanaovana pirinty amin'ny faritra curved boribory lavalava toy ny faritra, faritra amponga, ary Arc faritra.
Dry-harato curved lamba ambonin'ny milina fanontam-pirinty dia milina izay mandany ny efijery fisaka takela hanontana ny curved ambonin'ny.
Ny fitsipiky ny efijery fisaka pirinty amin'ny curved ambonin'ny a--roller mitondra amin '-mpiray dia manohana c-Mosaic-jaza izy. Nandritra ny fanontam-pirinty, ny fanontana lamba fisaka takela sy ny substrate hetsika raha mbola ny squeegee dia amin'ny toerana. Ny lamba fisaka dia clamped takela fanontam-pirinty teo amin'ny efijery toe sy ny lamba fisaka milina fanontam-pirinty curved efijery moves amin'ny fanamiana hafainganam-pandeha. Ny fitaovana fanontam-pirinty napetraka amin'ny fanohanana fitaovana ary mihodinkodina noho ny friction fanakonana lovia. Ny andalana hafainganam-pandehan'ny ny curved substrate amin'ny nip tsipika dia mitovy amin'ny hafainganam-pandehan'ny ny efijery fisaka takela mba hahatakatra ny squeegee fanontam-pirinty.
Ara-teorika, ny tsipika embossing tokony ho amin'ny ambony indrindra busbar ny fanaovana pirinty eny ambonin'ny substrate mba hanamora mitombo ny eny-web fiolahana sy ny fiantohana kalitao ny fanontam-pirinty. Fa ny tsy hanahirana ny fanitsiana, ny squeegee ankapobeny vao mainka nampiasa ny fara tampon'ny zoro ny 60 ° ± 15 °, ary izany dia takiana mba ho afaka hanitsy ny mitsangana sy ny ambaratonga niakatra-ary-teo lafiny. Fanitsiana ny mitsangana dia ny hahazoana antoka fa ny sisin'ny tsipika tsy mamokatra lateral fanitsiana fiovana rehefa niakatra sy nidina, ary foana amin'ny avo indrindra aligns fiara fitateram-bahoaka A; ny squeegee amin'ny zoro mitsangana ny 60 ° ± 15 ° no ampiasaina mba hahazoana antoka fa ny squeegee fiolahana miforona rehefa mitsangana fametrahana. α. Amin'ny tena fanitsiana, mba hahazoana antoka fa ny fiaramanidina takela fanontana lamba sy fitaovana fanaovana pirinty ho etỳ ambonin'ny dia avelany mandeha ny fotoana, ny imprinting tsipika kely mety ho nanatrika. Indrindra indrindra, rehefa substrate savaivony dia somary lehibe, ny imprinting tsipika hita dia tsy maintsy handroso. Ny fanohanana fitaovana ho an'ny fanontam-pirinty ny curved dia isan-karazany dia natao fitaovana manokana sy ny mpampiasa vokarina araka ny vokatra takiana.
Cylindrical kaontenera na bongo kaontenera azo natao pirinty roa tsiroaroa ny-roller bearings ny curved ambonin'ny, hasehonao-karazana sy ny kapoaka-karazana bushing bearings miaraka amin'ny halavany ny savaivony tahan'ny ny latsaky ny 1.5, ary malefaka poakaty kaontenera azo tohanan'ny inflatable fitaovana. Ny ellipse dia eo ho eo ao anatin'ny iray cylindrical ambonin'ny azo tohanan'ny iray cylindrical Lalàn'i Mosesy.
Ny fitsipiky ny milina fanontam-pirinty eny ambonin'ny ankapobeny ny cone dia mitovy ny fitsipiky ny milina fanontam-pirinty eny ambonin'ny ny Varingarin'i. Ny maha samy hafa dia ny sary endrika ny efijery takela fanaovana pirinty sy ny hetsika amin'ny teny efijery fanaovana pirinty ny lovia. Rehefa manao ny lamba fanakonana fanaovana pirinty takelaka ampiasaina ambonin'ny fanontana ny cone, dia ilaina ny voalohany hanatona ny anakiray dia efa naseho jerena ny ambonin'ny cone, Ary ho hitanao ny afovoan-sehatra mifototra amin'ny ny anakiray dia efa naseho fijery, ary avy eo dia mifidy ny mety endriny mba hanao ny lamba fanakonana lovia.
Amin'ny dikan-efgh izay afaka tanteraka handraisana ny mpankafy miendrika Abed, ny fanontam-pirinty takela manaraka endriky ny mpankafy no novokarina. Amboary tsara toeram-fiolahana eo amin'ny dikan-efgh ary mametraka ny o-mpiray toy ny mpankafy miendrika dikan. Avy eo, toy ny fanaovana pirinty ny ho etỳ ambonin'ny ny Varingarin'i, efatra rollers dia ampiasaina mba hanohanana ny substrate ambanin'ny ny lovia, ny lelan-tsabatra tafatoetra, ary ny lovia dia nifindra ao amin'ny mpankafy endriny, ary ho etỳ ambonin'ny ny cone lovia azo pirinty tamin'ny alalan'ny fanerena ny lelan-tsabatra. Nandritra ny fanontam-pirinty, ny fanontam-pirinty bongo nampidirina ho ao an-dalana, fifandraisana amin'ny efijery takelaka fanaovana pirinty ambany tsindry squeegee anankiray; raha ny lamba fanakonana takelaka fanaovana pirinty mahatonga horizontally manodidina ny mpiray ny mpankafy miendrika sary ny fampandrosoana, ny fanontam-pirinty fitaovana dia mihodina ny synchronously amin'ny fanohanana fitaovana. Sports; ranomainty eo ambany fanerena ny squeegee, nalahelo mba ho etỳ ambonin'ny ny substrate hamita ny fanontam-pirinty.